केपी ओलीले भने, 'एमाले कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन, जनयुद्ध प्रचण्डको ठूलो सैद्धान्तिक भूल थियो' - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
१५ मंसिर २०७४, शुक्रबार १४:१० December 3, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडाैं, १५ मंसिर । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा अाेलीले अाफ्नाे पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नभएकाे बताएका छन् । साथै उनले मार्क्सले भनेकाे समाजवाद र साम्यवाद केवल भन्ने र देखाउने मात्र भएकाे भन्दै त्याे लागु नहुने कल्पवृक्ष मात्र भएकाे स्पष्ट पारेका छन् । राजधानीबाट प्रकाशित एक दैनिक पत्रिकाका चर्चित सम्पादकलार्इ अाफ्नै निवासमा बाेलाएर अाेलीले साे कुरा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
लामाे समयदेखि नेपालमा नेकपा (एमाले)लार्इ कम्युनिस्ट पार्टी नभएकाे अाराेप लाग्दै अाएकाे थियाे । नाम मात्र कम्युनिस्ट राखेर कम्युनिस्ट नहुने भन्दै एमाले ‘पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीमा पतित संशाेधनवादी पार्टी’ भएकाे अाराेप पनि नेपालका अरु कम्युनिस्ट नेताहरुले लगाउँदै अाएका थिए । ती नेताहरुले एमालेले कम्युनिस्ट झण्डा र नामलार्इ केवल एउटा ट्रेडमार्कका रुपमा मात्र प्रयाेग गरिरहेकाे भन्दै अालाेचना पनि गर्दै अाएका थिए । एमालेले केही वर्षअघि नै पार्टीकाे केन्द्रीय कार्यालयबाट मार्क्स, लेनिनसहितका नेताहरुका फाेटाेहरु हटाएकाे थियाे । त्यसपछिकाे महाधिवेशनमा समेत ती फाेटाेहरु नराख्ने निर्णय गरेपछि एमालेमाथि थुप्रै प्रश्न तेर्स्याइएका थिए ।
अाेलीले अहिले बाेलेका यी कुराले ती अाराेप र प्रश्नहरुलार्इ पुष्टि गरेका छन् । अाेलीले अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिकलार्इ अन्तरवार्ता दिँदै अाेलीले अाफ्नाे पार्टी नाम मात्रकाे कम्युनिस्ट भएकाे स्वीकार गरेका छन् । एउटा सन्दर्भमा नाम कम्युनिस्ट राखिए पनि त्याे अब कम्युनिस्ट नरहेकाे उनकाे भनाइ छ । साथै अाेलीले अहिले नेकपा एमाले र माअाेवादी केन्द्रका बीच बनेकाे गठबन्धन पनि वाम र कम्युनिस्ट दुबै नभएकाे प्रष्ट पारेका छन् ।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका सम्पादक विजयकुमार पा‍ण्डेले अाेली निवासमै पुगेर लिएकाे अन्तरवार्तामा अाेलीले भनेका छन्, ‘यो ‘कम्युनिस्ट गठबन्धन’ पनि होइन र यो ‘वामपन्थी गठबन्धन’ पनि होइन । कम्युनिस्ट हाम्रो पार्टीको नाम हो। तपाईंको नाम ‘विजय’ हो। तपाईंको नाम विजय हुँदैमा तपाईंले हर पटक जित्ने हो र ? हर पटक जित्ने हो भने त तपाईंसित हर पटक भेट्नेबित्तिकै मैले जितौरी माग्नु पर्‍यो नि। तपाईंको नाम मात्र त विजय हो। हो, त्यसैगरी एउटा सन्दर्भमा पार्टीका नामहरू राखिएका हुन्छन्।’
अन्तरवार्तामा अाेलीले समाजवाद र साम्यवाद एउटा कल्पबृक्षमात्र भएकाे बताउँदै त्याे लागु नहुने व्यवस्था भएकाे तर्क गरेका छन् । साथै त्यसप्रति अाफ्नै पार्टीका मान्छे इमान्दार र याेग्य नभएकाे अाेलीकाे भनाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘…… साम्यवाद हाम्रो सरदर भाषामा राम राज्य हो । कल्पवृक्ष जस्तो । तर के अहिलेकै अवस्थामा त्यहाँ पुग्न सकिन्छ ? सकिँदैन। तर त्यो सुन्दर दूर उद्देश्यका लागि कल्पना त गर्न पाइन्छ नि । अरूको त कुरै छोडौं, मेरो आफ्नै पार्टीका कतिपय मान्छे पनि त्यो दूर उद्देश्य प्राप्तिका लागि कति इमानदार र योग्य छन्, म भन्न सक्दिनँ।”
माअाेवादी केन्द्र र एमालेबीच एकता हुने घाेषणा भइसकेकाे अवस्थामा अाेलीले यस्ताे कुरा किन बाहिर ल्याए भन्ने प्रश्न उब्जिएकाे छ । दुर्इ पार्टीबीचकाे एकताका बारेमा चर्चा चलिरहेका बेला अाेलीले प्रचण्डकाे नेतृत्वमा भएकाे १० वर्षे जनयुद्ध ठूलाे भूल भएकाे दावी गरेका छन् । उनले त्याे प्रचण्डले गरेकाे ठूलाे सैद्धान्तिक भूल र परिस्थितिकाे त्रुटीपूर्ण विश्लेषणकाे परिणाम भएकाे प्रष्ट पारेका छन् । उनले भनेका छन्, “माओवादीहरूको सशस्त्र संघर्ष एउटा सैद्धान्तिक भूल थियो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको त्रुटिपूर्ण विश्लेषणमा आधारित थियो । हामीले भुल्नु हुँदैन, त्यसबेला शान्तिपूर्ण संघर्षका बाटाहरू खुलै थिए। संवैधानिक बाटो खुला थियो । राजतन्त्र संवैधानिक भइसकेको थियो। गणतन्त्रवादी धारका मानिसहरू, थोरै संख्यामा भए पनि संसदमा पुगेर त्यसका लागि आवाज उठाइसकेको अवस्था थियो । माओवादी जनयुद्धभन्दा अगाडि निर्वाचनकै माध्यमबाट एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिसकेको अवस्था थियो।”
त्यसैगरी अाेलीले अाफ्नाे अन्तरवार्तामा १० वर्षे जनयुद्धले राजतन्त्र नफालेकाे पनि दावी गरेका छन् । साथै जनयुद्धले नेपालमा गणत‍न्त्र नल्याएकाे पनि उनकाे दावी छ । दरवार हत्याकाण्डपछि कृत्रिम रुपमा उभ्याइएका राजा ज्ञानेन्द्रलार्इ नेपाली जनताकाे अभिमत र दवावबाट मात्र समाप्त गरिएकाे उनकाे तर्क छ । उनले भनेका छन्, “सशस्त्र सङ्घर्षबाट हाेइन, मास मुभमेन्टबाट हटाइयाे ।”
एमाले अध्यक्ष केपी अाेलीकाे अन्तर्वार्ताकाे एक अंश
अाेलीकाे पूरा अन्तरवार्ता पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्
‘नेपालमा कम्युनिस्ट छन र ?’